Maamulka Beerta Nabadda oo iska diiday Amarka Gobalka Banadir,? Maxaase looga hadli waayay Lacagta lagu qaado Isbitaalka Digfeer,? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 7, 2017
Warsaxaafadeed ay soo saareen Ganacsatadda maalgashay Beerta Nabadda ee Muqdisho ayaa iska diiday Amar uga yimid Maamulka Gobalka Banaadir oo ahaa inay lacag la’aan ka dhigaan galitaanka Beerta oo ah goob loo dalxiis tago. Waxayna Ganacsataddu ku doodeen in Amarkan uu ka hor imaanayo Heshiiskii ay horay ula galeen Maamulka Gobalka Banaadir markii ay maalgashanayeen Beerta Nabadda.
Warsaxaafadeedka Ganacsatadda Beerta Nabadda
Warsaxaafadeedkan ayaa daba jooga Amar Qoraal iyo Af ah oo ay Maamulka Gobalka Banaadir ku fareen Ganacsatadda Beerta Nabadda inaysan wax lacag ah ka qaadi karin Dadka galaya Beerta Nabadda ee ku damaashaadaya.
Amar ka soo baxay Gobalka Banaadir
Beerta Nabadda ayaa ah Meel ay Dhalinyaradda Muqdisho u damaashaad tagaan. Isla markaana ku soo galaan Sawiro ay ku muujinayaan Bilicda Muqdisho. Waana goob soo jiidatay Shacabka Soomaaliyeed oo laga qaado qof kasta oo galaya 1 Dollar.
Sawir muujinaya Bilicda Beerta Nabadda
Ka hor inta aysan Ganacsatadan Maalgashan Beerta Nabadda waxay ahayd Goob Qashin qub oo dhibaato ku haysay Bilicda iyo Faaya Dhawrka Deegaanka. Waxaana inta badan isugu imaan jiray Dadka isticmaala Muqaabaaraadka, taasoo ay Dadka Deegaanku Walaac ka muujin jireen.
Sawir Hore oo Beerta Nabadda ah inta aan la dhisin
Tallaabadan ay Maamulka Gobolka Banaadir amarka ku dul dhigeen Beerta Nabadda ayaa Niyad jab ku abuuraysa Dhalinyaradda Soomaaliyeed ee doonaya inay Dalkooda Maalgashadaan.
Isbitaalka Digfeer oo ka mid ah Goobaha Danta Guud ayeey Maamushaa Hay’addo Turky ah oo ka sameeysa Dhaqaale farabadan, Mana jirto illaa iyo hadda cid faragalisay. Waxaana Bukaanadda ku jira Isbitaalkaasi qofka booqanaya laga qaadaa Qidmad ka badan tan lagu gallo Beerta Nabadda. iyadoo aysan jirin cid kala hadashay in la joojiyo Lacagtaasi.